Mayorga Rikardo: इस्पात खोक्रो संग धूम्रपान गर्न वालों
यसलाई व्यावसायिक खेलाडीहरूलाई निरन्तर शीर्ष प्रयास, प्रशिक्षण मा सबै भन्दा राम्रो एक स्वस्थ जीवन शैली दिन र नेतृत्व गर्न आफ्नो सबै भन्दा राम्रो के भनेर चिनिन्छ। मुक्केबाज दुनिया - कुनै अपवाद छ। यो Duel मा लडाकूको प्रशिक्षण शिविरमा भीषण छन्, Tesha आशा एकदिन च्याम्पियन बन्न कि। यसो गर्न तिनीहरूले धेरै मोजमस्ती र खराब बानी त्याग्नुपर्छ। तर यी नियमहरू Mayorga Rikardo को नाम ले एक घूंसेबाज लागू छैन उहाँले चुरोट सार्वजनिक यसको लत बाट लुकाइन् कहिल्यै किनभने। तथापि, धूम्रपान उहाँलाई संसारमा च्याम्पियन बन्ने देखि रोक्दैन।
Mayorga Rikardo मनागुआ मा अक्टोबर 3, 1973 मा जन्म भएको थियो। खेल प्रशिक्षण उत्कृष्ट परिणाम देखाउन र, एक स्कूल शिक्षक को सल्लाह मा द्वारा स्कूल उमेर पहिले नै म बक्सिङ थाले। यो सबै जीवनका कठिनाइ धेरै हटाउन पछि उसलाई सक्षम र समस्या आफ्नो मातृभूमि मा जरुरी सैनिक सेवा बिना पारित। खैर, एक अवैतनिक घूंसेबाज, त्यो सेना टोली लागि प्ले।
समर्थक क्यारियर सुरु
पहिलो व्यावसायिक लडाई Mayorga Rikardo आयोजित अगस्ट 29, 1993। यस पल्ट कोस्टा रिका मा आयोजित थियो। एक "सिकार" को रूपमा Humberto Aranda को नाम ले एक सम्मान स्थानीय खेलाडी रोजेका थिए। त्यहाँ एक निकारागुआ लागि समस्या को कुनै संकेत थिए, तर उहाँले बस 10 राउंड्स दूरी हिंड्न सक्छ लाग्यो एक पटक छ। दुर्भाग्यवश, जवान सैनिक आफ्नो काम रात फेरबदल निकै तयारीको असर भन्ने महसुस गरेनन्। Mayorga र छैटौं पल्ट कोस्टा Rican शाब्दिक उसलाई sneered किनभने उहाँले रोकियो अझै पनि पाँच राउंड्स बाँच्न सक्षम भए तापनि। परिणाम - एक हार रेकर्डो TKO। कि fiasco पछि, हाम्रो नायक छैन बाहिर बज्न 1994 सम्म आयो।
पछि Mayorga Rikardo गर्न लगनशील प्रशिक्षण कोस्टा रिका केही महिनाको लागि फिर्ता आउने र जीत एक तीन-लडाई धारण छ। यो अवस्था उहाँलाई आफ्नो पैतृक भूमि फिर्ता र राष्ट्रिय च्याम्पियन को शीर्षक लागि एउटा शीर्षक लडाई पकड गर्न अनुमति दिन्छ। म उसलाई सामना Miguel Angel पेरेस। युद्धमा गोलो6मा रेकर्डो नकआउट लागि विजयमा टुङ्गियो र उहाँले आक्रामक, मुखर, उद्दंड, उत्तेजक लड शैली लागि Matador उपनाम थियो।
यो विजय एक पंक्ति मा थप तीन जीतहरु परिणाम, तर पछि बक्सिङ देखि रिटायर गर्न केही समय खेलाडी थियो। तर, त्यो किनभने ठूलो इच्छा बक्स, र आफ्नो आर्थिक समस्या समाधान गर्न को, कार्य गर्न 1998 मा फेरि सुरु हुन्छ। 2000 सम्ममा, यो अर्को पछि एक प्रतिद्वन्द्वीको पराजित, को upswing छ।
एक पटक प्रसिद्ध अमेरिकी प्रमोटर डन राजा को हेरविचार मा, Matador चिरपरिचित विरोधीहरू संग लडाई मा संलग्न भए र जुलाई 28 को फलस्वरूप, 2001 Endryu Lyuisom संग लडाई मा तल गए। त्यतिबेला उहाँले च्याम्पियन थियो, तर एक indisputable अख्तियार छलफल भएको थिएन तापनि gayanets। पहिलो लडाई कारण दोस्रो राउन्ड मा एक टकराव खेलाडीहरूलाई टाउको गर्न अमान्य घोषित भएको थियो। यो पनि एउटा तत्काल पुनः खेल पल्ट सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। र पहिले नै मार्च 30, 2002 Mayorga बाहिर एक प्रतिद्वन्द्वीको पाँचौ राउन्ड मा, ढकढक्याउन जसबाट को WBA शीर्षक विजेता।
25 जनवरी, 2003 विश्व यसका महिमा बहुमुखी बक्सिङ मा देखेको छ। रेकर्डो Mayorga त वर्तमान WBC च्याम्पियन Vernon फरेस्ट संग लड्न गए। प्राविधिक र लचिलो अमेरिकी गर्ने undisputed मनपर्ने छलफल भएको थियो। तर सार्वजनिक को आश्चर्य धेरै, को सांप को विभाजन मा मुख्य लडाकु बनेर, दुई बेल्ट यसलाई लिएर तेस्रो राउन्ड मा Matador र बाहिर ढकढक्याउन। तर पनि अधिक हडताली फेरि एक विजय निकारागुआ साबित जो एक पुनः खेल, को परिणाम थियो।
रेकर्डो Mayorga जो सधैं, डिसेम्बर 2003 मा आफ्नो मनोरञ्जन संग दर्शक, आकर्षित गरेको पोडियम नजिकै फेरि थियो झगडे। IBF च्याम्पियन - आफ्नो abuser को Cory Spinks थियो। युद्धमा दूरी तोकिएको सबै लामो र अंक फलस्वरूप निकारागुआ competently कक्षा मा outplayed, अमेरिकी बलियो थियो।
तर रेकर्डो गर्न सबैभन्दा आपत्तिजनक दिग्गज फेलिक्स ट्रिनिडाड हातमा द्वारा पराजित भएको थियो। यो अक्टोबर 2004 मा भयो। पोर्टोरिकन राउन्ड3मा एक zabombit प्रतिद्वन्द्वीको फलस्वरूप कि को लागि तल ढकढक्याउन थियो, र 8 औं गोल केही mnogoudarnyh संयोजन पछि लडाई रोक्न रेफरी बाध्य।
मिति, अन्तिम लडाई Mayorga 29 अगस्ट, 2015 मिति दिएको छ। त्यो दिन Matador लडे Sheynom Mozli र छैटौं राउन्ड मा नकआउट द्वारा उहाँलाई गुमाए।
खेलाडी कडा प्रशिक्षण जारी छ र नयाँ शानदार झगडे पकड प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ।
ब्रुस ली प्रशिक्षण: शरीर र आत्मा को सिद्ध अनन्त बाटो
Vener Galiev: संग्रामहरू जीतेको उमेर एक रोकावट छैन
मिश्रित मार्शल आर्ट, दाउपेच र ब्राजिलियन जिउ-जित्सु Hayabusa लागि उपकरण को निर्माता
जो संसारमा सबै भन्दा ठूलो आघात छ?
Kolman लगाउनुहोस्। लडाकु बाटो
मास्को मा Mayakovsky स्मारक। लेखक र फोटो स्मारक कहाँ छ
लाभ र संतृप्त फैटी एसिड को हानि
राम्रो भरा: आफ्नै हात सफाई, र समय र पैसा बचत
व्यावसायिक आत्म-संकल्प: गठन आधारभूत चरणमा
कसरी बिरालो मूत्रको गन्धलाई हटाउने? सुझावहरू र ट्रिक्सहरू
होटल सूर्यास्त Resort4* (फुकेत): वर्णन, यात्री समीक्षा
सुन्निएको गिजा। उपचार
Neonates मा हिप बाल्यकाले: कारणहरू, लक्षण, व्यायाम
मनोचिकित्सक जी अलेक्जेन्डर Danilin: जीवनी, क्रियाकलाप र समीक्षा
"सिम-3": प्रणाली आवश्यकताहरू। कम्प्यूटर गेम द सिम 3
ZMZ-40 9: प्राविधिक विशेषताहरू र मरम्मत